Bill Graham Mgbakọ gelọ na-akwado maka WWDC | Esi m mac
Gralọ Nzukọ Bill Graham na-akwado maka WWDC
Nke a abụghịzi ihe ọhụrụ. Nke a na-esi isi dị ka Isi ihe. Apple ụnyaahụ malitere iji ejiji ugbua n'ụlọ akụkọ akụkọ ifo ebe ha na-arụ ebe ọ bụ na Isi Okwu Ikpeazụ na September 9, 2015 (ebe egosiri iPhone 6S / 6S Plus). Gralọ Nzukọ Bill Graham (ma ọ bụ Bill Graham Civic Center) dị na San Francisco, ma nwee ike ịchọta ndị bịara ya karịa onye bu ya ụzọ, ụlọ ọrụ Moscone dị n'otu obodo ahụ, ihe karịrị 2km n'etiti ha.
Ọzọ, saịtị ahọpụtara ịnabata WWDC nke afọ a na-amalite ugbu a, ụbọchị ole na ole tupu ihe niile amalite, iji kwadebe maka ihe omume (ihe ịchọ mma na windo, ọkọlọtọ na-ezo aka na isiokwu nke a) n'agbanyeghị na o doro anya nwere agba dị mfe na ọchịchịrị karịa nke isi mmalite. Ọkọlọtọ na akwụkwọ ịma ọkwa ga-emecha nkwadebe ndị a ka thelọ Mgbakọ ahụ dịrịla njikere na-esote ụbọchị 13.
Dị ka ị maara nke ọma, ihe omume ahụ dị otu izu, nke Isi ihe bụ mbido egbe. Otutu n'ime ihe omuma ndi ozo ga - eme na ebe a na - eme ememe, nke bu Moscone Center. Onye a malitere ịkwadebe maka nhọpụta ụnyaahụ, mgbe ihe nkịtị bụ na Apple na-ahapụ ihe ọ bụla dị njikere karịa otu izu tupu WWDC. Oge igbu oge a bụ n'ihi mmemme gara aga nke oghere debere ruo Fraịde gara aga.
Olileanya ihe niile a kwadebere na ngwụsị izu a iji nwee ike ịnụ ụtọ ụbọchị ndị a na-eche ogologo oge site na ndị ofufe obodo nke ika ahụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile dị njikere: ndị na-ege ntị akpọrọ, mgbasa ozi sitere n'akụkụ ụwa niile a kpọtụrụ aha, na ịnụ ọkụ n'obi ịhụ ihe ga-adị n'etiti ihe ndị ọzọ, mmeghari ohuru nke OS X (MacOS?), IOS, watchOS na TVOS. Ewezuga ngosipụta nke ngwaọrụ ọhụụ. Ngwanu, gosi ihe ngosi. You ga-atụ uche ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Gralọ Nzukọ Bill Graham na-akwado maka WWDC
Soy de Mac na-etinye uche maka WWDC na Mọnde a, June 13
Apple ga-ezute ọnọdụ Amazon iji nweta Amazon Prime Video ngwa maka Apple TV